မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: မမဝသုန်နှင့် 2-50… 5-50 အလွဲများ
မိန်းမကြီးးGive me 5-50
မမဝသုန်းSorry.. 5-50 ..?
မိန်းမကြီးးYes.. give me 5-50
မမဝသုန်းNo..Mam.. you give me 15Pound for your purchasing of 12-50..So, I return you 2-50
မိန်းမကြီးးYes..but give me 5-50
မမဝသုန်းNo Mam.. I can’t.. How can I give you 5-50..Are you kidding?
မိန်းမကြီးးOh My Dear… Thus why I ask you to give me 5-50
မမဝသုန်းSorry Mam .. I can’t..
မိန်းမကြီးးOh how the hell you are… I told you give me5of 50 ..
မမဝသုန်းOh ..I see… you want5of 50 pence note?
မိန်းမကြီးးYes..
နောက်တော့အဲဒီဆိုင်ကအလုပ်ထွက်လိုက်ပြီးသည့်တိုင်အောင် 2-50..5-50 လေးကိုတော့ မကြာမကြာသတိရဖြစ်နေပါသေးတယ်… လူကိုးနော် …
အလွဲလေးက ဗဟုသုတရတယ်။း)
ဟုတ်ပါ့ သူက အတိုကောက်ပြောလိုက်တော့ လူကကြောင်သွားတာပေါ့ နော်..ဖြစ်တတ်ပါတယ်...ဒါတောင် မမ၀သုန်က listening ဒီလောက်ကောင်းတာ.....။
မမဝသုန်နှင့် အလွဲများပေါ့..ဒီမှာလည်း Quarter (၂၅ ပြား) က မရှိမဖြစ်..
သြော်... ဖြစ်ရမယ် တို့ အစ်မကတော့...